ဒေါ်လာတသန်းတန်မင်းသမီး One Million Dollar Woman | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ဒေါ်လာတသန်းတန်မင်းသမီး One Million Dollar Woman
ဒေါ်လာတသန်းတန်မင်းသမီး One Million Dollar Woman
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 2, 2012 in Celebrity, World News | 16 comments
ABC သတင်းမှာ ကမ္ဘာကျော် တရုတ်မင်းသမီး ကြေးကြီးကြီးနဲ့ အော်ဒါလိုက်တဲ့အကြောင်း ဖတ်ရတော့ ဆရာမအတန်းထဲမှာ ရုပ်ရှင်ပြကွက်တခုအကြောင်း လမ်းကြုံပြောခဲ့ဖူးတာ အမှတ်ရတယ်။ အရက်ဘားမှာ မင်းသားဂ သူနဲ့လိုက်အိပ်မလားမေးဒေါ့ မင်းသမီးဂ ဘယ်လိုအစားမှတ်သလဲ၊ ဖာမဟုတ်ဘူး စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ပြန်ပက်တယ်။ မင်းသားဂ မောင်ဂီလို မားကက်တာလားမသိဘူး၊ မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ တညဒေါ်လာတသန်း ပေးရင်ဂေါလို့ ထပ်မေးဒယ်။ ဒေါ်လာတသန်းနေရာ ကျပ်ငွေသန်းရှစ်ရာလို့ ပြောင်းတွေးကြိကြပေါ့ဗျာ။ ဆရာမ ပြောနေတုန်း သူ့စိတ်ထဲမှာ ငါရော အဲသလို လူမသိသူမသိ တကယ် အကမ်းအလှမ်းခံရရင် ဘယ်လိုနေမလဲ စဉ်းစားပုံရဒယ်လို့ သူ့မျက်နှာကြည့်ပီး ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလည်း ငါရော ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ အတွေးပေါ်ခဲ့ဒယ်။ အပြောဂဒေါ့ရွှေမန်းပေါ့ဗျာ…သို့သော် သန်းတထောင်တန်ဂွင် တခုလောက်များ မျက်စိရှေ့မှောက် အချောင်ကျ လာခဲ့ရင် (ဘယ်သူမှလည်း မသိနိုင်ဘူး အဲဒီအချိန်မှာ ယူဆဂဲ့ဒယ်ဆိုရင်ပေါ့)။ သဂျီးဂ သူများရေးထားဒါတွေ ပြန်တင်ရင် ပို့စ်တင်သူအာဘော် ပါရမယ်ဆိုလို့ ကြားဖူးဒါလေးနဲ့ ဆက်စပ်နိဒါန်းပျိုးဒါပါ။
သဒင်းဂေါင်းစဉ်မှာ တညဒေါ်လာတသန်းနဲ့ ကြေးစားလိုက်တယ်လို့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အစွတ်စွဲခံနေရလို့ ရေးထားဗာဒယ်။ ကမ္ဘာကျော် “Crouching Tiger, Hidden Dragon,” “Memoirs ofaGeisha” and “Rush Hour 2” ရုပ်ရှင်များထဲဃ တရုတ်မင်းသမီးဂ တညဒေါ်လာတသန်းယူပီး ရာထူးမှအဖြုတ်ခံလိုက်ရသူ ကူမြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲဟောင်းနဲ့ မအိပ်ခဲ့ဂျောင်း ဒေါသတဂျီး ငြင်းဆန်လိုက်သည်။
ဟောင်ကောင်သဒင်းစာ Apple Daily တွင် မင်းသမီး Zhang Ziyi သည် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Bo Xilai အပါအဝင် အခြားသူများအား တညဒေါ်လာ တသန်းနီးပါးရယူ၍ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ဂျောင်း စွတ်စွဲခံထားရသည်။ ဟောင်ကောင်တွင် ဒုတိယအရောင်းရဆုံးဖြစ်ပီး တရုတ်အစိုးရဂို မကြာခဏ ဝေဖန်လေ့ရှိသူ Apple Daily ဂ ဇီရီအား ပြည့်တန်ဆာလိုက်၍ ပြီးဂဲ့သည့် လေးနှစ်အတွင်း ဒေါ်လာသန်း ၁၁၀ ဝင်ငွေရှိဂဲ့ဂျောင်းလည်း ဆိုထားသည်။
ကျားအလှ နဲ့ နဂါးအက
လွန်ခဲ့သောတပတ်က ပြုလုပ်သည့် “Dangerous Liaisons,” ဇာတ်ကား အထူးရှိုးပွဲသို့ ဇီရီမလာရောက်ကြောင်း နိုင်ငံတဂါသတင်းများတွင် ဖော်ပြအပီး စွတ်စွဲချက်များကို ဒေါသတဂျီး ငြင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သဒင်းစာ အဆိုရ Bo Xilai မှာ အဓိက ဖောက်သည်ဖြစ်ပီး ၂၀၀၇ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ခုနှစ် များအတွင်း သူမနှင့် လိင်ဆက်ဆံမှု ၁၁ကြိမ်ရှိဂဲ့သည်။ ဘီလျံနာသူဌေး Xu Ming စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် ဇီရီသည် စုစုပေါင်းအခကြေးငွေ ဒေါ်လာသန်းတရာ့တဆယ် စုဆောင်းမိဂဲ့သည်။
ဇီရီ၏ ဟောင်ကောင်ရှေ့နေကုမ္မဏီတခုဂမူ ထိုရေးသားဂျက်အား ပယ်ချထားသည်။ စွဲဆိုဂျက်များ မမှန်ကန်ဂျောင်းနှင့် သူ၏အမှုသည်အား နစ်နစ်နာနာ နာမည်ပျက်စေပါဂျောင်း ရှေ့နေကုမ္မဏီဂ သဒင်းစာအား ပြန်လည်တုံ့ပြန်သည်။ သဒင်းစာအနေဖြင့် အလျင်အမြန် တောင်းပန်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါဂ တရားဥပဒေဂျောင်း ရင်ဆိုင်မှု ပြုလုပ်မည်ဆိုသည်။
မင်းသမီးဇီရီ၏ ပြင်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ၏ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးသားထားသော ထုတ်ပြန်ဂျက်တွင် ယင်းကိစ္စအတွက် အပြည့်အဝ တာဝန်ယူ ရှင်းလင်းမှုပြုမည်ဆိုသည်။ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံသတင်း ဖြန့်သူများဂို ဒီတဂျိမ်မှာ လက်တုံ့ပြန်ဗာ့မယ်။ မိမိတို့မှန်ဂျောင်း သက်သေပြမယ်၊ တရားဥပဒေဗိုင်း တုံ့ပြန်သွားမယ်၊ အမှောင်ဂျောင်ကလောင် တနေရာမှာ ပုန်းနေဒဲ့ မင်းဂိုတွေ့အောင် ရှာပြမယ်လို့ အင်တာနက်မှတဆင့် ထုတ်ပြန်သည်။
ဇောင်ဇီးရီ ကြောင်ကြီးချီ အချောင်တီးမည်..။
တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီတွင် ထင်ရှားဖူးခဲ့သူ Bo Xilai ခမျာ လွန်ခဲ့သော လများအတွင်း သူ့အား ရာထူး ပြုတ်ကျသွားစေဂဲ့သော လာဘ်စားမှု၊ အာဏာအလွဲသုံးစားမှု အရှုပ်တော်ပုံများစွာ တသီတသန်းဂျီး ရင်ဆိုင်နေရသည်။ စီးပွားရေး အဝေမတည့်မှုကြောင့် ဗြိတိသျှလုပ်ငန်းရှင်အား သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုတွင် သူ့မိန်းမ ကြိုးကိုင်စီစဉ်ခဲ့မှုမှာ လတ်တလောနောက်ဆုံး အရှုပ်တော်ပုံဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဝန်ကြီး တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက် ဘိုသည် Chongqing ဒေသ ကူမြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲဖြစ်လာဂဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဒေသဆိုင်ရာ ပါတီအကြီးအကဲအရာမှ အထုတ်ခံရပီး တရုတ်ပြည်နိုင်ငံရေးဦးဆောင် ပေါလစ်ဗြူရိုအဖွဲ့မှ အနားပေးခံရသည်။ သူ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလည်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။
By RYM MOMTAZ | ABC News – Wed, May 30, 2012
The Chinese actress who starred in “Crouching Tiger, Hidden Dragon,” “Memoirs ofaGeisha” and “Rush Hour 2” has angrily denied selling her sexual favors toadisgraced official of the ruling Chinese Communist Party for $1 million per night.
A story in the Hong Kong tabloid newspaper Apple Daily alleged that Zhang Ziyi provided her sexual services in exchange for close to $1 million U.S. dollarsanight to former Commerce Minister Bo Xilai and other clients. The Apple Daily, Hong Kong’s second-best-selling paper andafrequent critic of the Chinese regime, also alleged that Ziyi had earned $110 million over four years via prostitution.
Ziyi, whose absence from last week’s Cannes premiere of her latest movie, “Dangerous Liaisons,” was noted by the international media, has issuedaheated denial of the charges.
According to the Apple Daily, Zhang Ziyi’s main client was Bo Xilai, who allegedly had sex with her 11 times between 2007 and 2011. The report alleges Ziyi amassed 110 million dollars from these and trysts with other clients arranged byaprominent billionaire businessman, Xu Ming.
“Your allegations concerning our client are completely untrue and constituteagrave libel upon her,” said the firm’s statement to the Apple Daily. The firm demandedafull and prompt retraction and apology and reserved the right to legal action.
Zhang Ziyi’s publicist issuedastern statement vowing accountability. “This time, we are telling those rumor-makers that we will respond. We will prove our side of the story; we’ll seek legal justice; we’ll find you in the darkest corner and go after you,” the online statement read.”
Bo Xilai, though the scion ofafamily prominent in the Chinese Communist Party, has been hit withaseries of scandals involving corruption and abuse of power in recent months leading to his highly unusual dismissal from the party. The most recent scandal involves accusations that his wife orchestrated the murder ofaBritish businessman, Neil Heywood, because ofaconflict of interest. Bo became head of the Communist Party in Chongqing in 2007 after serving as Commerce Minister. He was fired as local party chief in March 2012 and suspended from China’s ruling Politburo in April.
ဟောက်စ် အော့ဖ် ဖလိုင်းယင်း ဒါဂါ …..
မှာကတည်းက ရင်က ကျိုးချင်ချင်
အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျုပ်လဲ အဲဒိ တရုတ်ကြီးလို ချမ်းသာခဲ့ရင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါနဲ့ အမေဒစ်ကန်က ဂျစ်ဂလို တွေ အကြောင်း ရေးပြပေးပါအုန်း
ဘာဘဲပြောပြော.စီလုတ်မဂျီး.ကြေးကတော့ အင်မတန်ကြီးသမို့ 
မင်းသမီးတွေ ငွေရှာရလွယ်လိုက်တာနော် ။
ဒီသဒင်းဂဒေါ့ အသရေဖျက်မှု့နဲ့ ပြဿနာတက်ခြေ၇ှိနိုင်ဒယ်ထင်ဒယ်
အချစ်မာမျက်စိမ၇ှိဘူးလို့ဆိုဂျဘေမယ့် ကြည့်ပြီးဒေါ့မှ ဖီလ်းလာဒဲ့သဘောဂရှိဗျန်ရော
ဘယ်လိုဘဲဖီးကွေးကွေး မားကက်တာအမြင်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု့ဆိုဒဲ့သဘောဂို
ဒေါ်လာတစ်သန်းကို တညဆိုတာက ဟိုဟာမပြောနဲ့ အိမ်ခြံ မြေဂျီးဒွေဝယ်ပြီးပတ်ပြေးရင်တောင်
ဘာဖြစ်ဖြစ်လမ်းကြုံလို့ အခွင့်ရေးလေးများရရင်ဒေါ့ တစ်ခါလောက်ဒေါ့
တိုးတိုး ပြောဂျပါဟ ဒို့နိုင်ငံက ဘောစိတွေကြားသွားရင် အဲ့ဒီမင်းသမီး စုတ်ပြတ်သတ်သွားမယ်
ဒီဂ ဘောစိတွေက စစ်သည်လေးသိန်းအားတွေချည်းဘဲ
အဲဒီသူဌေးဟာ ဒေါ်လာတသန်းကို ဒီ့ထက်ပိုတန်အောင်မသုံးတတ်ဘူးပဲ…
ဒေါ်လှ တစ်သန်း = တစ်ည
ကုန်ပစ္စည်းက မင်းသမီး …
ဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ..
ဖြစ်ချင်မှလည်း ဖြစ်နိုင်မယ် ….
ဒါတွေ ကျုပ်အလုပ် မဟုတ်ဘူး ..
အဲဂလို မင်းသမီးလေးနဲ့ တစ်ညလောက် အိပ်ချင်ဒယ် ..
ဒေါ်လှ တစ်သန်း မကဘူး .. နှစ်သန်း .. နှစ်သန်း …
minmin king says:
သန်းတရာပေးမယ် ဗျာ …ရမလား